Amava amahle kwindlu ethile
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguCarolina
Amava ethu esiwafumene kuhambo oluninzi asikhokelele kwezi ngqwalasela: xa usiya kwilizwe lasemzini ufuna indlu etofotofo, enekhitshi elixhotyiswe kakuhle, igumbi lokuhlambela elitofotofo, amagumbi okulala amabini, nendawo yokupaka iimoto efikelelekayo apho unokuhamba ngokukhuselekileyo. imoto yakho. Ngokuqinisekileyo ayithethi ukuba ne-mega villa enamagumbi alishumi kunye namagumbi okuhlambela asixhenxe, kwakhona kuba ngokucacileyo ixesha lakho elininzi liya kuchithwa ukutyelela indawo okuyo.
Ukutyhubela iminyaka siye sayila indlu yeendwendwe entle efumanekayo kangangeenyanga ezininzi ngonyaka enobutofotofo obaneleyo kwaye ijikelezwe yigadi enkulu ezele buhlaza.
Ipropathi yethu ikwindawo yobuchule ekufutshane neendawo ezinomtsalane kubakhenkethi. INaples ikwimizuzu nje embalwa kude nazo zonke ezona ndawo zidumileyo (Capri, Ischia, Procida, Sorrento, Pompeii, Amalfi, Positano, Paestum), iimyuziyam kunye neendawo zakudala. Sikufutshane nonxweme lwaseLazio kwaye kwindlela enye eya eRoma kukho nezinye iindawo ezidumileyo njengeCaserta eneRoyal Palace, iGaeta, iFormia, iMinturno, iTerracina, iLatina kunye neziqithi zasePontine. Siziikhilomitha ezi-2 ukusuka kuhola wendlela oya emazantsi ukhokelela kumagama eNaples, Amalfi kunye neSalerno City ngelixa ukuya emantla kukhokelela ngqo kumagama eRoma. Indlu yethu ikwindawo ezele ziindawo zokutyela, iiPizzerias, iivenkile ezinkulu, iziko leevenkile ezimbini, isibhedlele kunye neyona ndawo ibalaseleyo yePastry Shop emhlabeni "Le champs Elysee", sicebisa ukuba uyindwendwele :) !! Ngokusekwe kumava ethu ixesha elisusela kuMeyi ukuya ku-Okthobha lelona lihle kakhulu lokuyonwabela iholide yakho kule ndawo.
INaples ikwimizuzu nje embalwa kude nazo zonke ezona ndawo zidumileyo (Capri, Ischia, Procida, Sorrento, Pompeii, Amalfi, Positano, Paestum), iimyuziyam kunye neendawo zakudala. Sikufutshane nonxweme lwaseLazio kwaye kwindlela enye eya eRoma kukho nezinye iindawo ezidumileyo njengeCaserta eneRoyal Palace, iGaeta, iFormia, iMinturno, iTerracina, iLatina kunye neziqithi zasePontine. Siziikhilomitha ezi-2 ukusuka kuhola wendlela oya emazantsi ukhokelela kumagama eNaples, Amalfi kunye neSalerno City ngelixa ukuya emantla kukhokelela ngqo kumagama eRoma. Indlu yethu ikwindawo ezele ziindawo zokutyela, iiPizzerias, iivenkile ezinkulu, iziko leevenkile ezimbini, isibhedlele kunye neyona ndawo ibalaseleyo yePastry Shop emhlabeni "Le champs Elysee", sicebisa ukuba uyindwendwele :) !! Ngokusekwe kumava ethu ixesha elisusela kuMeyi ukuya ku-Okthobha lelona lihle kakhulu lokuyonwabela iholide yakho kule ndawo.
Indlu yeendwendwe ikwindawo yethu engundoqo, ngenxa yoko kuya kuhlala kukho umntu kwindlu enkulu oza kuxhasa iindwendwe zika-Airbnb ukuba kukho nayiphi na ingxaki enxulumene nendlu yeendwendwe okanye ukuba bafuna nje ingcebiso malunga nendlela yokucwangcisa ngcono uhambo lwabo lwabakhenkethi. .
Indlu yeendwendwe ikwindawo yethu engundoqo, ngenxa yoko kuya kuhlala kukho umntu kwindlu enkulu oza kuxhasa iindwendwe zika-Airbnb ukuba kukho nayiphi na ingxaki enxulumene nendlu…